Fametrahana ZPanelX amin'ny Debian 7 (Wheezy) | Avy amin'ny Linux
eliotime3000 | | Tambajotra / seriver
Miarahaba antsika rehetra. Amin'ity indray mitoraka ity dia hasehoko anao ny fomba fametrahana sy fikirakira ny tontonana fitantanana fampiantranoana antsoina hoe ZPanel, izay mahazo laza noho ny interface azy izay nitovy tamin'ny CPanel tamin'ny voalohany ary manana menio mora azo sy mora ampiasaina izao.
Ho fanampin'izay, azo ampiasaina ho an'ny Windows izy raha te hanandrana azy eo amin'io sehatra io ianao, na dia marihiko aza fa eo amin'io rafitra io dia miadana kokoa noho ny Internet Explorer 8 izy io.
Na dia eo amin'ny tranonkala ofisialy aza, dia manondro fa tsy misy afa-tsy ny fanohanana an'i Ubuntu (samy 11.10 sy 12.04 LTS) ary CentOS 6, dia hampianariko anao ny fametrahana ny tontonana fanaraha-maso fampiantranoana amin'ny Debian 7 miorina amin'ny script ampiasaina amin'ny Ubuntu 12.04 LTS ( fantatra ihany koa amin'ny anarana kaody "Precise Pangolin") ary amin'izany dia afaka mankafy azy nefa tsy misy fahasarotana lehibe avy eo.
Ao amin'ny pejy izay manondro ny fomba ahafahana mampiasa ny script hametrahana ho azy ny ZPanel miaraka amin'ny Ubuntu 12.04 LTS, misy koa ny script hametrahana ny ZPanelX ao amin'ny Ubuntu 10.04 "Lucid Lynx" izay manan-kery ihany koa raha mbola manana Debian 6 ianao (fantatra koa amin'ny hoe "Squeeze"). Na izany na tsy izany, tsy hisy ny fahasarotana ahafahana mametraka ZPanel raha tsy tianao ny manamboatra serivisy tanana toy ny Apache, FTP, serivisy mailaka ankoatry ny hafa.
1 1.- Fanomanana ny rafitra
2 2.- Misintona, mametraka ary manamboatra
1.- Fanomanana ny rafitra
Mba hahafahanao mametraka ZPanelX en Debian Wheezy, tsy maintsy tadidintsika fa mazava ho azy fa tsy tokony hialantsika ireo interface graphique raha te hanana fampisehoana tsara kokoa ny mpizara.
Raha ny amiko dia mampiasa netinstall aho mba hametrahana laharam-pahamehana ireo fonosana sasany izay tsy tokony hapetraka, satria ny script ZPanel dia tompon'andraikitra amin'ny fisintomana, fametrahana ary / na fanamboarana serivisy toy ny Apache HTTP Server, PHP, serivisy mailaka, FTP, ankoatry ny serivisy hafa izay amboary amin'ny fomba mandeha ho azy.
Safidy hapetrakay ao amin'ny mpizara aminay any Debian
Raha tsy manam-paharetana ianao na manana PC efa antitra afaka manao an'io fomba io amin'ny milina virtoaly, dia mamporisika anao hampiasa QEMU, Xen ary / na VirtualBox OSE (na ny Oracle VirtualBox raha miasa miaraka amin'ny Windows / Mac ianao) hialana amin'izany fanjifana harena be loatra izany.
2.- Misintona, mametraka ary manamboatra
FAMPITANDREMANA!: Ireo fomba fanao izay hatao amin'ity ampahany ity, ny baiko SU ary tsy Sudo hahafahana mampiasa ny baiko, ankoatry ny tsy fijaliana lesoka. Ny lesoka rehetra natao nandritra ny fametrahana sy / na ny fametrahana ny ZPanel dia vokatry ny fiasan'olombelona, ​​noho izany mamporisika anao izahay hamaky tsara ireo dingana ato amin'ity torolàlana ity.
Rehefa avy nanao ny olana izahay handao ny Debian Wheezy miaraka amin'ireo fitaovam-pitantanana toy ny fahaizana, ny fahazoana dpkg, ny hafa ary ny hafa, dia manohy manaraka ireo dingana aseho ao amin'ilay rohy izahay izay manondro ny fomba tokony hampiasainay ny script hialana amin'ny olan'ny fanombohana ny serivisy (Raha manana olana amin'ny fikirakirana ianao dia avelako eto ianao ny lahatsoratra nataoko tamin'ity forum ity tranokala hisintona sy hampandeha ny script).
Miorina amin'izany, hanohy ny fanarahana ireo dingana voalaza amin'ny ZPanel script nomen'ny tranokala zVPS anay, afa-tsy ny dingana fametrahana ny fiankinan-doha "Yum install ld-linux.so.2 curl", tsara hampiasainay "Apt-get install libc6 curl", hatramin'ny Debian, io fonosana io dia misy ny fiankinan-doha (Misaotra betsaka Petercheco ny ny torohevitra).
Ankehitriny, mihazakazaka ny script izahay ary manaraka ireo dingana:
Manaiky ny fahazoan-dàlana GPL izahay
Izahay dia mamaritra ny faritry ny fotoana mifototra amin'izay asehony ny tranokala PHP (raha ny amiko, Amerika / Lima no ampiasaiko).
Manamafy izahay raha te hanohy.
Manoratra izahay ny fomba hidirantsika amin'ny ekipa misy alika default (raha amiko dia panel.eliotime3000.pe)
Misafidy isika raha hiditra amin'ny alàlan'ny IP am-bahoaka na anatiny (raha ny fahitako azy dia anatiny izany).
Izahay dia mamaritra ny lakilen'ny fidirana amin'ny database MySQL na MariaDB.
Manamafy ny fametrahana azy izahay ary miandry ny fikirakirana ho azy ny mpizara anay ary hamerina azy ho azy izahay.
Fanamarihana: Raha tsy afaka miditra amin'ny alàlan'ny FQDN voatendry izy ireo, dia afaka manoratra ifconfig eth0 hahafahana miditra amin'ny IP an'ny milina virtoaly.
Izay no zava-drehetra amin'izao fotoana izao. Farafaharatsiny mba hamporisihako hampiasa ny IP anatiny fa tsy hampiasa ny an'ny besinimaro mba tsy hananana olana rehefa miditra. Mandrapihaona ary mandra-pahatongan'ny fampianarana manaraka.
Alohan'ny handehanako dia avelako ho anao ireto pikantsary manaraka ireto:
Manaiky ny fahazoan-dàlana GPL
Fametrahana ny faritry ny fotoana (Amerika / Lima)
Safidio raha hametraka sy / na hanavao
Farito ny FQDN
Safidio na IP ho an'ny daholobe na anatiny
Apetraho ny tenimiafiko MySQL
Hamafiso ny fametrahana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Fametrahana ZPanelX amin'ny Debian 7 (Wheezy)
st0rtmt4il dia hoy izy:
Compa Deluxe, amin'ny antsipiriany tsara!
Mamaly an'i st0rtmt4il
Tongasoa ianao, sakaiza. Inona koa, misaotra an'i Petercheco, izay voalohany nametraka ZPanelX tao amin'ny Debian Wheezy.
Raha dinihina ny boky torolalana nataoko dia halefako ao amin'ny forum ZPanelX hahafahanao mizaha toetra ny tontonana amin'ny Debian fa tsy hijanona ao amin'ny Ubuntu sy / na CentOS fotsiny.
Ary ahoana no fijeriny aorian'ny fametrahana azy?
Tsy nanam-potoana hanaovana ny pikantsary farany aho, saingy apetrako ihany (Manantena aho fa avelan'izy ireo hanova ny lahatsoratro aho, satria tsy nanandrana ny fotoana nataoko taloha).
Rehefa mametraka an'i Debian dia ampidino ny safidy "Web Server", "DNS Server", "Server Server", "Server Server", "SQL Database" ary "Standard System Utilities" (raha tsy izany dia noho ilay ".log", Tsy ho tsapako ilay gaffe goavana nataoko teo).
Inona no tsara ary arosoko: torolàlana havaozina ho an'i Debian 7 hanatsarana ny endrika ary hitovizany amin'ireo distros niasa tamin'ny Ubuntu na Mint. Izany hoe, ny fanitsiana ny lafin-javatra toa ny plymouth, fandikana endri-tsoratra (miaraka amin'ny freetype-Infinity ohatra), dpi ho an'ny efijery mihoatra ny fullHD an'ny karazana retina, ny fampidirana marina ny Gtk amin'ny Qt, sns. Izany hoe izay rehetra misy ifandraisany amin'ny endrika ivelany, ankoatry ny sary masina na bara na dock…. Ny zavatra sarotra amin'ny raharaha. Azoko antoka fa mpampiasa maro no hankasitraka azy mandrakizay.
Jacob dia hoy izy:
Salama daholo, efa nanandrana aho fa mandefa ahy hadisoana mifandraika amin'ny git fa rehefa manao ny installer base ny OS dia apetrakao par default. Misy olona efa nahazo zavatra mitovy amiko ve nanjo ahy ???
Valiny tamin'i Jakôba
teknolojia21 dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny tutorial. Mikasa ny hanofa VPS DigitalOcean aho, saingy mbola tsy nanapa-kevitra ny hampiakatra ny navoakan'ny debian na centos, manantena aho fa hahazo azy tsy ho ela hanaraka ireo dingana ireo.
Valiny amin'ny tecnologia21
tsy misy baiko dia hoy izy:
aiza ny baiko ???
Valio ireo tsy mpividy
Ninja Strikers, lalao vaovao ho an'ny Line.